Zvigadzirwa-1 Fekitori - China Zvigadzirwa-1 Vagadziri uye vanotengesa
Ultrasonic sonochemistry muchina wekurapa mvura
ltrasonic sonochemistry ndiko kushandiswa kwe ultrasound kune makemikari maitiro uye maitiro. Iyo michina inokonzeresa sonochemical mhedzisiro mune zvinwiwa ndicho chiitiko cheacoustic cavitation. Acoustic cavitation inogona kushandiswa kune akasiyana maficha sekupararira, kuburitsa, emulsification, uye homogenization. Panyaya yekupfuudza, isu tinemidziyo yakasiyana yekusangana nekuburitswa kweakasiyana maratidziro: kubva pa100ml kusvika kumazana ematani emitsara yekugadzira emabhizimusi pabatch. CHINONYANYA ...
Ultrasonic yakapararira chisanganiso
Mhando dzakasanganiswa dzinonyanya kusanganisira kupararira, homogenization, emulsification, nezvimwewo Ultrasound inogona kunyatso sanganisa zvinhu zvakasiyana zvine kumhanya kwakanyanya uye yakasimba cavitation. Ultrasonic masanganiswa anoshandiswa kusanganisa mashandisirwo anonyanya kuzivikanwa nekubatanidzwa kwezvisimba kugadzirira yunifomu yakapararira, iyo depolymerization yezvimisikidzo kudzikisa saizi, nezvimwe. -BL20L Kakawanda 20Khz 20Khz 20Khz Powe ...
Ultrasonic mvura inosanganisa michina
3000W ultrasonic yakapararira michina
Iyi sisitimu ndeyediki diki yakatetepa viscosity zvinwiwa kugadzirisa, senge CBD mafuta, kabhoni nhema, kabhoni nanotubes, graphene, kupfeka, nyowani magetsi zvigadzirwa, alumina, nanoemulsions kugadzira.
Ultrasonic yakapararira sonicator homogenizer
Ultrasonic homogenizing inzira yemuchina yekudzikisa zvidiki zvidiki mumvura kuitira kuti zvigoita zvakaenzana zvidiki uye zvakaenzana zvakagoverwa. Sonicators anoshanda nekugadzira yakanyanya sonic kumanikidza mafungu mune yemvura midhiya. Masaisai ekumanikidza anokonzeresa mukati memvura uye, pasi pemamiriro akanaka, kukurumidza kuumbwa kwemabhuru-mabhuru ayo anokura nekubatana kusvikira asvika pakukura kwavo, achizunguzika zvine chisimba, uye pakupedzisira achidonha. Ichi chiitiko chinonzi cavitation. Kuda ...
Sonication chiito chekushandisa simba renzwi kushatisa zvidimbu mumuenzaniso, pazvinangwa zvakasiyana. Ultrasonic homogenizer sonicator inogona kukanganisa matishu uye maseru kuburikidza necavitation uye ultrasonic mafungu. Chaizvoizvo, iyo ultrasonic homogenizer ine tipi iyo inokurumidza kwazvo kudedera, ichikonzera matema mumhinduro yakapoterera kuti ikurumidze fomu uye kudonha. Izvi zvinogadzira sheari uye nekuvhundutsa mafungu ayo anotsemura maseru nezvidimbu. Ultrasonic Homogenizer sonicator inokurudzirwa kuti homogenization ...